तपाईँले समय समयमा इन्टरनेटबाट फाइल वा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुभएको छ होला। यसरि डाउनलोड गरेको फाइल कति सुरक्षित छ ? जान्न जरुरि हुन्छ। तपाईँ हामिले इन्टरनेट बाट डाउललोड गरेको फाइल वा सफ्टवेयरहरुमा भाइरस भए नभएको निश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ। तर भाइरस भए नभएको कसरि पत्ता लगाउने ?
हामीले डाउनलोड गरेको फाइलहरुमा भाइरस छ भने हाम्रो कम्प्युटरमा रहेको एन्टी भाइरसले पत्ता लगाउन सक्छ। तर कुनै कुनै भाइरस एन्टीभाइरसले पनि पत्ता लगाउन नसक्ने खालको हुन्छ । आज यसको बारेमा तपाइहरुले जानकारी पाउनु हुनेछ ।
पहिलो तरिका भनेको कुनै पनि सर्च इन्जिनमा जानुहोस र भाइरस टोटल डटकममा जानुहोस । भाइरस टोटलमा तपाईलाई तीनवटा विकल्प हुन्छ ।
एउटा फाइलको अर्को युआरएलको र त्यसैगरी अर्को सर्चको । यदि फाइलमा भाइरस छ कि छैन भनेर जाकारी पाउन सबैभन्दा पहिले भाइरस टोटलको फाइल मा जाने त्यसपछि चुज फाइलमा गएर फाइल सेलेक्ट गर्ने र स्क्यान गर्ने ।
यदि त्यो भन्दा पहिले कसैले त्यो फाइललाई स्क्यान गरेको छ भने रिएनालाइजमा गएर स्क्यान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि तपाईँलाई रिपोर्ट जस्तो देखाउँछ । यदि त्यहाँ डिटेक्सन रिसियो जिरो छ भने त्यो फाइलमा भाइरस छैन् ।
यदि भाइरस भए जिरो भन्दा अन्य अंक देखाउछ । यदि त्यो फाइलमा भाइरस भए कुन भाइरस छ भनेर पनि त्यही बाटै हेर्न सकिन्छ ।
Previous Article होटलको क्वारेन्टाइनमा अभिनेत्री मनीषा कोइराला
Next Article भाइरल जोडी कृष्ण वली र रुपाले खुसि हुदै बाडे यस्तो खबर, लेखे मनछुने शब्द – बधाई को ओइरो